မိန်းကလေးများအဘို့အသံမဏိလက်ဝတ်ရတနာနယူးဒီဇိုင်းပန်းရောင်လေးလေးလက်ဝတ်ရတနာသတ်မှတ်မည် - တရုတ် Jinyun လက်ဝတ်ရတနာ
ကွင်းဆက် link ကိုလက်ကောက်
က Man လက်ကောက်
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Band လက်ကောက်
သံမဏိနှလုံးသော့ချက်ဌ lock အသစ်ကိုရီးယားစတိုင် ...
နယူးဒီဇိုင်းဖက်ရှင်သံမဏိနှလုံး-shaped jewe ...
သံမဏိလက်ဝတ်ရတနာနယူးဒီဇိုင်းပန်းရောင်လေးလေး Jewe ...
နောက်ဆုံးပေါ်စတိုင်သံမဏိဂစ်တာဆွဲပြား jewe ...
စျေးနှုန်း / $: 1,9261
အလေးချိန် / g: 11.5
အကြှနျုပျတို့အားအီးမေးလ်ပို့ ပိုများသောနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ Download as PDF
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး Julong လက်ဝတ်ရတနာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကွမ်ကျိုး, တရုတ်တွင်တည်ရှိသည် 2006 ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ B2B နေဖြင့်သံမဏိလက်ဝတ်ရတနာလက်ကားအတွက်အထူးပြုနေကြသည်နှင့်ဤလိုင်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 10 နှစ်ကျော်ပါပြီ။ ဒီတော့ဝေး, ငါတို့ ထိုအချိန်မှစ. 300 ကျော်ပေးသွင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအများဆုံးအဆင်ပြေငွေပေးချေမှုလမ်းရှိသည်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ကနေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ထက်ပို 100,000 အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းရှိပါတယ် www.julongsteeljewelry.com ။ အားလုံးအသစ်ကမော်ဒယ်တွေ 2000pcs ထုတ်ကုန်အသစ်တွေထက်အကြောင်းပိုမိုအဘို့အသီးအသီးရက်သတ္တပတ်များက updated လိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်မျိုးစုံဒီဇိုင်းကအရမ်းကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြပြီးအပြည့်အဝကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများက '' လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ထံမှအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်တွေနဲ့ကျေနပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထက်ပို 10000 မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဝင်တဦးကိုသူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်သာမိမိတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိရန်အကြောင်းကို 3-15 ရက်အတွင်းလိုအပ်ကတည်းကအများကြီးအဆင်ပြေငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဟုထားတဲ့-စတော့ရှယ်ယာကိုပြန်လည်ပုံမှန်အလို့ငှာစေမည်ဟု, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှများမှာပါပြီ။
ကျနော်တို့အလွန်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ပစ္စည်းများနှင့်မြန်ဆန်အဆင်ပြေငွေပေးချေမှုလမ်း, ထိုကဲ့သို့သော Pay-PAL အဖြစ်, ဘဏ်ငွေလွှဲ, အနောကျပိုငျးပြည်ထောင်စုနှင့်ငွေ gram ပါသည်။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားလျှင်, ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဆက်သွယ်တွန့်ဆုတ်ကြဘူးပါ။ အီးမေးလ်: julong@julongsteeljewelry.com Whatsapp: +86 18028698162 လေးစားစွာဖြင့် သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဘာတွေလဲ? ။ ပစ္စည်း: အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ ။ အင်္ဂါရပ်များ: အဘယ်သူမျှမနီကယ်, ခဲ, သံချေး, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်အသားအရေ ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး wear သို့မဟုတ်ဖခင်, မိခင်, မိတျဆှေ, စုံတွဲ, စုံတွဲခရစ္စမတ်, ဟယ်လို, မွေးနေ့, နှစ်ပတ်လည်နေ့လက်ဆောင်တွေရည်ရွယ်သည်။ ။ 1 00% စမ်းသပ်ပြီး, 100% အရည်အသွေးကိုအာမခံ! ။ မျက်နှာပြင်ထက်ပို texture ဖုံးကွယ်နိုင်အောင်, မှန်ချောကိုသုံးပါ။ ။ အများအပြားဒဏ်ငွေကြိတ်ပြီးနောက်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော။ protrusion မပါဘဲ flat ။ အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီရွေးကောက်သည်မဟုတ်လော အဓိကထုတ်ကုန် - စသည်တို့ကိုဆွဲပြားပုတီး, လက်ကောက်, ကောက်, ကွင်း, ပုတီး, လည်ဆွဲအဓိကကွင်း,
အမျိုးမျိုးသောသံမဏိပစ္စည်းများ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ် - ငါတို့သည် 2006 ကတည်းကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များနှင့်အတွေ့အကြုံရှိလက်ဝတ်ရတနာထုတ်လုပ်သူများမှာ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု - ငါတို့သည်လေးတင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည်နှင့်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ခိုလှုံပါ၏။ R & ဃ - ငါတို့သည်ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များမှအထိခိုက်မခံနေသောမိတ်ဖက်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းရှိသည်။ ချွတ်ယွင်းပြန်အမ်းငွေမူဝါဒက - - ငါတို့သည်တင်းကြပ်စွာ3လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတင်ပို့အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ကုန်ပစ္စည်းများစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ မဆိုရညျအသှေးပြဿနာကြောင့်ပို့ဆောင်မှုရှိသည်ဆိုပါက (သင်အထုပ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 15 ရက်အတွင်း), အချိန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားပေးပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ပြန်အမ်းဒါမှမဟုတ်လာမယ့်အမိန့်၌သင်တို့ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါစုံစမ်းရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သံမဏိလက်ဝတ်ရတနာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရွဲစွန်ခံများမှာ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ moq, အရွယ်အစားနှုန်းဒီဇိုင်းနှုန်း3PCs USD 300 ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်စမ်းသပ်ဖို့နမူနာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်, သင်ကအနည်းဆုံး USD 100 အမိန့်ပေးနိုငျသျောလညျး, အရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ် 1 ကီလိုဂရမ်လောက် USD 30 ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းစီးပွားရေးနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်အလိုရှိ၏။ လေးစားစွာဖြင့် Bella
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျနော်တို့အမြဲသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်လက်ပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးရှိသည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အချိန်မီယုံကြည်, ငါတို့ဖောက်သည်ကျေနပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုပြုလိမ့်မည်။ သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများ, မှတ်ချက်များ, ဒါမှမဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အီးမေးလ်က: julong@julongsteeljewelry.com အသင်းဝင်အဆင့်: (သင့်အလို့ငှာငွေပမာဏ accoring, သင်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့် disccount ပျော်မွေ့မည်) Level1 5% Level2 8% Level3 10% Level4 12% Level5 15% Level6 18% Level7 20%
ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပို. ပို. အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီအမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချိန်အတွက်အမှာစာများလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်သေချာအောင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုချိန်ညှိ။ အောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကအလုပ်လုပ်ခြေလှမ်းများဖြစ်ပါသည်: (Bejing အချိန်အရ) , 12:00 မွန်းတည်မတိုင်မီပြီးသားပေးဆောင်နေကြသမျှသောသစ်ကိုအမိန့်အဘို့ကျနော်တို့ကစီစဉ်မည်ဖြစ်ပြီးထိုနေ့မှာစတော့ရှယ်ယာစစ်ဆေးတိုင်းနံနက် 1 ။ သငျသညျ 12:00 မွန်းတည်ပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုစေလျှင်, ငါတို့သည်ကြောင့်စီစဉ်များနှင့်နောက်နေ့အတွက်စတော့ရှယ်ယာစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ 2. သင်ထုပ်ပိုးစာရင်းလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင်သည် 6:00 pm အချိန်မတိုင်မီနောက်ဆုံးငွေပေးချေမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လျှင်, ငါတို့သည်တူညီတဲ့ညဦးယံ၌အမိန့်ထုတ်တင်ပို့နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ 6:00 pm တွင်ပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုစေလျှင်, ငါတို့သည်နောက်နေ့အတွက်အမိန့်ထုတ်တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ 12:00 မွန်းတည်မတိုင်မီချိန်ခွင်လျှာပြီးပါကအဘို့အလို့ငှာထည့်သွင်းရာ၌ခန့်ထားပြီလျှင်ပြီးသားပေးဆောင်နေကြရသောအမိန့် 3.For, ငါတို့သည်တူညီတဲ့ညဦးယံ၌သင်တို့ကိုနောက်ဆုံးထုပ်ပိုးစာရင်းပေးပို့မည်နောက်နေ့အတွက်အမိန့်ထုတ်တင်ပို့မည်။ သငျသညျ 12:00 မွန်းတည်ပြီးနောက်လက်ကျန်ငွေဖြည့်များအတွက်ဖြည့်စွက်အမိန့်ရာ၌ခန့်ထားပြီဆိုပါက, ငါတို့သည်ဖြည့်စွက်အမိန့်စီစဉ်နှငျ့သငျမှနောက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးထုပ်ပိုးစာရင်းပေးပို့ခြင်းနှင့်အမိန့်မနက်ဖြန်အပြီးထွက်တင်ပို့ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ သငျသညျအမိန့်အောင်မပြုမီ, ကြင်နာစွာသင့်ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေအတိုင်းအချိန်စီစဉ်ပေးပါ။ သငျသညျစေသည်ဟုမဆိုအဆင်ပြေဝမ်းနည်းပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်။
4.Payment Method ကို
paypal အကောင့်: julong@julongsteeljewelry.com ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ သင်အနောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စုအားဖြင့်ငွေပေးချေစေမှီ, ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ကို receiver ၏အမညျကိုစစ်ဆေးပါ။ ဘဏ်လွှဲပြောင်းသတင်းအချက်အလက် ကုမ္ပဏီအကောင့်
အကျိုးခံစားဘဏ်အမည် HSBC က
ကုမ္ပဏီအမည် Jinyun ကုန်သွယ်ရေးလီမိတက်
အကျိုးခံစားဘဏ် 1 ဘုရင်မကြီးရဲ့လမ်းအလယ်ပိုင်း, ဟောင်ကောင်
shipping ပေါ်လစီ ကျနော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သည့်လိပ်စာမှတင်ပို့မည်။ ငါတို့အားဖြင့်အမိန့် items EMS သို့မဟုတ် TNT သို့မဟုတ် DHL သို့မဟုတ် FedEx သို့မဟုတ် UPS အားဖြင့်တင်ပို့နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကအမြန်ကုမ္ပဏီကနေရလာသောအခါငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီသင့်ရဲ့အမိန့်ထုတ်တင်ပို့နေသည်အဖြစ်က e-mail ဖြင့်ခြေရာခံခြင်းအမှတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကလမ်းလိပ်စာပေးပို့ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3-5 ရက်ကြာအရာတံခါးဝစံ Air ကို-အမြန်တံခါး, ကိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ Delivery အချိန်အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်မပါဝင်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလပ်ရက် မှလွဲ. တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ရန်, နေ့တိုင်းထွက်တင်ပို့နေကြသည်။ တနင်္ဂနွေပေါ်တွင်အမိန့်ကိုအောက်ပါတနင်္လာနေ့တင်ပို့လိမ့်မည်နေစဉ်ရက်အပေါ်ထားရှိအများစုကအမိန့်,2သို့မဟုတ်3ရက်အတွင်းတင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ခြေရာခံအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူ e-mail ကိုအတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ခြေရာခံအရေအတွက်ကလက်ခံရရှိနှစ်ဆယ်လေးနာရီပြီးနောက်, သငျသညျမှာအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုခြေရာခံနိုင်ပါလိမ့်မည် http://www.ems.com.cn/english-map.jsp http://www.tnt.com /: http /www.dhl.com/en.html http://www.ups.com/en.html http://www.fedex.com Delivery အချိန်လိုရာခရီးရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ် မူတည်. ခြားနားသည်။
shipping နည်းလမ်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ Delivery ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတံခါးကို-to-တံခါးကိုပေးပို့ပေး DHL, UPS, FedEx နှင့် TNT: julong လက်ဝတ်ရတနာအားလုံးကြီးတွေလေးရေကြောင်းကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုင်အခဲမိတ်ဖက်ညျဆောကျခဲ့သညျ။ ပို့ဆောင်ချိန် items သငျသညျအထဲက check လုပ်ထားပြီးနောက်အောက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလ၌ထုတ်တင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကကွဲပြားခြားနားပေးပို့ပေါ် မူတည်. ပေးပို့ဘို့အကြောင်းကို 3-5 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းယူစခွေငျးငှါသငျသညျကို select ကိုဆိုလိုသည်။ ကြှနျုပျတို့မှားသို့မဟုတ် undeliverable လိပ်စာတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ရေကြောင်းလိပ်စာမှန်ကန်သောနှင့်ပေးပို့ဖြစ်ပါသည်သေချာပါစေ။ အမိန့်ခြေရာကောက် ငါတို့သည်သင်တို့မောက်၏ကလစ်မှာသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင့်ရဲ့တင်ပို့အတည်ပြုခဲ့သည်သောအခါ, သင်သည်သင်၏အတည်ပြုချက်ကို e-mail, တစ်ဦးခြေရာခံခြင်းအရေအတွက်ကလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကြှနျတေျာ့ကို item ငါ့ကိုရောက်ရှိဖို့အဘို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူကြမည်နည်း စနေနေ့, တနင်္ဂနွေနှင့်ပြည်သူ့အားလပ်ရက်ဖယ်ထုတ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း, ပို့ဆောင်မှုကာလ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တွက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကဖြန့်ဝေဘို့အကြောင်းကို 3-5 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းကြာပါသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့တင်ပို့ကိုခြေရာခံနိုင်သလဲ ငါတို့သည်သင်တို့ check လုပ်ထားထွက်ကြပြီးနောက်လာမည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတစ်နေ့တာ၏အဆုံးမတိုင်မီသင်၏ဝယ်ယူမှုတင်ပို့မည်။ သင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော '' က်ဘ်ဆိုက်မှာသင့်ရဲ့ပေးပို့များ၏တိုးတက်မှုကိုစစျဆေးနိုငျဒီတော့ကျနော်တို့ခြေရာခံအရေအတွက်ကိုနဲ့ e-mail ပို့လိမ့်မယ်။ ကြှနျတေျာ့တင်ပို့ရောက်ရှိဘယ်တော့မှလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း လွတ်ရန်သင့်ကို item 10 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းမှတက်ခွင့်ပြုပေးပါ။ ကတုန်းပဲရောက်လာမပါဘူးဆိုရင်, ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် "ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိပါ။ ကျနော်တို့အလျင်အမြန်ပြန်သင်ရလိမ့်မယ်။
ယခင်: မိန်းမတို့အဘို့အကောင်းဆုံးရောင်းချနှလုံး shaped ပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းဖက်ရှင်သံမဏိလက်ဝတ်ရတနာအစုံ
နောက်တစ်ခု: 18K ရွှေပန်းကန်သံမဏိပနျးပှားကိုတို့လက်ဝတ်ရတနာသတ်မှတ်မည်
High Quality လက်ဝတ်ရတနာ
လက်ဝတ်ရတနာ ပေးသွင်း Making
round လည်ဆွဲ Hypoallergenic အကြီးတန်းဘဝကမျှော်လင့်ခြင်း ...
ဖက်ရှင်ရွှေရတနာသံမဏိလူပျိုကို C ...
နယူးဒီဇိုင်းကာတွန်းကျက်သရေသံမဏိ neckla ...